कर्णाल प्रदेश सभा बैठकमा नेकपाका नेता एवम् प्रदेश सभा सदस्य यामलाल कंडेलले कोरोना विरुद्धको लडाईमा सरकारले रिर्पोट एकातिर र व्यवहार अर्कैतिर गरिरहेको बताएका छन् ।
‘रिर्पोट र व्यवहारमा तालमेल मिलेको छैन । सरकार निर्णय गर्न सक्षम छ गरिरहेको छ । संघीय सरकारले गरेका निर्णयलाई आधार मानेर आफू भन्दा तलका स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको छैन । आत्म समीक्षा गरौं काम गर्ने तरिका सुधार गरौं । प्रदेशमा भारतबाट आइरहेकाहरुलाई समन्वयात्मक रुपमा अघि बढाउन आग्रह गर्दछु,’ उनले भने, ‘बबई देखि गन्तब्य सम्मको यात्रा देख्दै खेरीको यात्रा विकराल छ, शोभनिय र उपयुक्त छैन । बबईबाट वीरेन्द्रनगर आउन तीन घण्टा लाग्छ । त्यहाँ अभिलेख तयार गरेर स्थानीय तहको सरकारसँग यी साधनबाट यति व्यक्ति आउँछन भनेर समन्वय गर्न जरुरी हुन्थ्यो । व्यवस्था गरेको भन्ने छ र व्यवहारमा देखिएको छैन ।’
उनले यातायातको व्यवस्थापन के हो भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे ? ‘उद्धार कोही सरकारले गरेको, कोही व्यक्तिले गरेको भनिएको छ, तर आम नागरिक कोही ट्याक्टरमा छन्, कोही टिप्परमा छन, कोही ट्रकमा छन, कोही बसमा छन्, कोही धनगढीबाट आएका गाडी बेरोकटोक सुर्खेत आएका छन्,’ उनले भने, ‘कोरोना कर्णालीमा प्रतिकुल बन्दै गइरहेको छ । विद्यालयमा सबैलाई राख्नु पर्ने बाध्यता छ । सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ त्यो अनुसार क्वारेन्टाईन बनाउन सकिदैन, तर सरकारले जसलाई जिम्मा दिएको छ सो अनुसार भएको पाइएन । अनुगमन गर्न घण्टाघरमा गए हुन्छ ।’
क्वारेन्टाईनको सुरक्षासहितको व्यवस्थापन गर्न उनले सरकारलाई आग्रह गरे । ‘घण्टाघरमा हेर्दा प्रष्ट भइसकेको छ । संक्रमितलाई ल्याउने व्यवस्था छ भन्ने छ, तर कसैलाई सहि समयमा ल्याइएको छैन । आरडिटी पोजेटिभ आएका नागरिकलाई ट्याक्टरमा ल्याइन्छ,’ उनले भने, ‘आइसोलेसनमा ल्याउने व्यवस्था के मा ल्याउने हो ? कोसँग सम्पर्क छ, एम्बुलेन्स कहाँ छ ?’
उनले वीरेन्द्रनगरलाई राम्रो राजधानी बनाउन खोजेपनि समस्याको राजधानी बनाइएको बताए । उनले भने, ‘यहाँको अवस्था लथालिङ्ग छ । हामी सबैको के सहयोग चाहिन्छ तयार छौं । जे समस्या परेको छ समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।'